Sida loo sameeyo - Ikkaro
Sida loo DIY ama naftaada u sameeyo waa hab nololeed.
Abuur walxaha laga soo bilaabo xoqidda, wax ka beddel oo jabso kuwa hadda jira, dib u isticmaal oo dib u warshadeyn ugu samee waxyaabo gebi ahaanba ka duwan wixii loo qaabeeyey oo aannaan weligood u malaynaynin in la isticmaali karo.
Sida loo sameeyo waa mala-awaal saafi ah, hal-abuur, xiise.
Fiiri casharradeenna ku saabsan sida loo sameeyo iyo DIY
Aan aragno sida loo sameeyo tan fudud katarabtii carruurta ee lagu sameeyay marada dharka lagu xidho iyo ulaha jalaatada. Waxaa loogu talagalay carruurta. In aad wakhti la qaadato iyaga oo dhisaya ka dibna la ciyaarayo bilaabida noocyo kala duwan oo ah nashqado.
Waxaan ka faa'iideysan doonnaa fursadda si aan u sharraxno fikradaha iyo xogta kala duwan ee ku saabsan katarooleyaasha taariikhda iyo dagaalladu iyadoo ku xiran da'da ilmaha.
Waxaan ku barayaa inaad sameyso bulaacad aad u fudud laakiin aad waxtar u leh kaabsoosha kafeega. Way fududahay oo waxaan isweydiinayay in tabobar la sameeyo iyo in kale, maxaa yeelay maahan talaabo talaabo, waa talaabo kaliya. Laakiin waxaan jeclahay xalalkan maalinlaha ah ee qofkasta uu ku qaban karo walxaha maalinlaha ah.
Laakiin waxa cad ayaa ah in qof kasta oo haysta kafee kaabsal sameeya, kiiskeyga Dolce Gusto, uusan tuuri karin kaabsulka sababo kala duwan awgood. Sababtoo ah waanu nijaaseynaa oo maxaa yeelay si tartiib tartiib ah ayaa loo baneynayaa qashinkuna wuu kaa daadanayaa.
Haddii aad tahay kafee kafee waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso labadan maqaal ee ku saabsan sida loo sameeyo rooti kafee
Qaxwaha qaxwada leh mashiinka dharka lagu dhaqo
Guriga lagu dubay dheriga
Waxaan is arkaa a Sawirka Cooph wuxuu khiyaaneeyaa fiidiyowga oo jiidaya dunta waxaan ku dhammeeyaa rukumo Kanaalkaaga Youtube isla markaana layaabay fudeydka xeeladaha uu adeegsanayo iyo natiijooyinka ay helaan.
Waxa ay na bareyso waa inaan helno saameyn layaableh ku dhiirrasho inaad isku daydo waxyaabo cusub iyo male-awaal badan. In kasta oo dabcan, aakhirka waxaan qiyaasayaa in natiijooyinka laga helay dalabkii isla khiyaanooyinkii uu adeegsaday xirfadle iyo hiwaayad ay noqonayaan wax aan caadi ahayn. Waxaan u maleynayaa in tani ay ku siin laheyd liistada 'filashooyinka / xaqiiqada' aan jeclaan laheyn inaan aragno wax badan
Waxaanan ka faa'iideysaneynaa fursad aan ku kooxeyno dhammaanteen Casharrada DIY isla qaybtaas oo leh 4 qodob oo ah Sawirka DIY, laakiin waxaan horeyba ugu helnay xoogaa xeelado dheeri ah liiska.
Sida loo sameeyo wasakhda guryaha lagu sameeyo ee guryaha lagu sameeyo
Guriga oo fudud, oo aan lahayn elektaroonik ama farsamooyin. Aynu yeelno qoyaanka qoyaanka qoya qolalkayaga, qolalka ama meel kasta oo aan rabno.
Waxaan ka hadli karnaa 2 nooc oo sunta ka saara:
Rabaayaasha isticmaala silica
Iyada oo leh kombaresarada iyo kondensiyada
Wasakhda huurka wax baabiisa
Waxaan ka hadlaynaa qaab loogu talagalay qoyaan yar, oo ku habboon kabadhada iyo meelaha xiran.
Maaha dawo rasmi ah, waxay si fudud nooga caawineysaa inaan helno jawi qalalan.
Meelaha yaryar, ee ku jira weelasha
Ma aqaano haddii aad ogtahay, laakiin dukaamada qalabka iyo dukaamada heerka sare waxay iibiyaan sanduuqyo caag ah oo qoyaanka qoya.
Sida loo sameeyo viking bakeerigaaga gaarka ah
Ma waxaad tahay cervercero? Hagaag, tani kama maqnaan karto gurigaaga. Haddaydaan ahaynna, waa hadiyadda ugu habboon, ee gacmahaaga lagu sameeyay ... Aan aragno sida loo sameeyo koob biir Viking ah.
"Viking" waa waxa casharku sheegayo anigu ma aanan xaqiijin in Vikings ay ku sameeyeen sidaas oo kale. Laakiin waxaan qaadanay liisanka maxaa yeelay waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo DIY ah oo ka baxsan Instructables.
Weelku wuxuu ka samaysan yahay alwaax alwaax ah iyo qalab asaasi ah, faas iyo mindi. Qoryaha la xushay waxay ahaayeen duqey. Markaad dooranayso qoryaha, waxaa muhiim ah inaad tixgeliso hadhuudhka iyo hadhuudhka qoryaha. Sidaa darteed maahan alwaax jilicsan laakiin waa hadhuudh wanaagsan oo leh xididdo isbarbar socda, taas oo goyneysa wax aad u fudud.
Sidee loo sameeyaa masaxa ilmaha
Haddii aad waalid tahay waxaad isticmaali doontaa masax ilmaha waana mid ka mid ah waxyaabahaas tan iyo markii tijaabooyinka aad ogtahay inaad sii wadi doonto adeegsiga weligood.
Waxaan u keenayaa cashar ku saabsan sida loo sameeyo masaxa qoyan, inaan si fiican ula isticmaali karno ilmaheena ama u adeegsiga guriga. A DIY ka mid ah «caserotes».
Masaxyada aan helnay waa kuwo aad u jaban, in kastoo ay adkaan doonto in kuwa ganacsiga lagu badalo kuwan, waa run hadii hadaad dhamaatay oo dukaamadiina ay xiranyihiin ama aad safar aaday ama cunugaaga uu nooc un leeyahay ee dulqaad la'aanta kiimikooyinka laga helo masaxaadka ganacsiga, markaa casharradan ayaa imaan kara.
Sida buug loo sameeyo lambar
Waan arki doonaa sidee buug loogu dhigaa lambar hab aad u dhakhso badan oo macmal ah.
Buug garaynta oo had iyo jeer ka kooban 2 qaybood, tan koowaad oo aad ka helayso sawirka qoraalka iyo tan labaad oo sawirkan lagu daaweynayo OCR, a Qalabka Aqoonsiga Astaamaha Muuqaalka
Dhaqan ahaan, buugaagta waxaa lagu marsiiyay bog bog, tani waa geedi socod aad u gaabis ah oo ku adkaaday sababo la xiriira lafdhabarta buugaagta, kuwaas oo qalooca bogagga ka dibna OCR aysan si fiican u aqoonsan ereyada. Waxaa la xusay in dad badani furfuraan si ay ugu fududaato hawsha iskaanka.
Sida loo sameeyo 2 × 2 Rubik cube leh laadhuu
Waxay i weydiiyaan boostada ah dhismaha kuub Rubik ah ee fasalka carruurta da'doodu tahay 10-11.
Intii aan raadinayey xal iyaga u qalma, waxaan idinkaga tagayaa tan cSida loo sameeyo birlab magnetic 2 × 2 Rubik la laadhuus ah.
Nasiib darrose uma qalmaan maxaa yeelay waa xal aad qaali u ah, iyo in la isticmaalo qalab aan ku habboonayn da'dooda, laakiin laga yaabee inay ku caawin doonto.
Kuwa idinka ah ee blogka raacay muddo dheer, a magnetic rubik's cube la mid ah laakiin 3 × 3
Maaddaama xaaladdan ay jirto kaliya laadhuu 8, ma haysanno mid dhexe oo aan u adeegsan karno udub dhexaadka dadka kale oo dhan, sidaa darteed waxa aan sameyno waa soo saarista kubbad bir ah oo u shaqeyn doonta sida kubbadda isku-dhafka ah si loo caddeeyo dhaqdhaqaaqa laadhuuga.
Sida loo sameeyo dabinka kaneecada
Waa xagaa oo kaneecadu nasasho nama siiso. Waan arki doonaa sida loo sameeyo dabinka kaneecada ee guriga lagu sameeyo aad u fudud in la sameeyo oo aad u raqiis ah oo leh dhalo balaastig ah iyo sed ku saleysan CO2
Waa hagaag, tani waa tijaabo. Runtu waxay tahay shalay waan khayaanay natiijadana dib uma eegi doono ilaa axada maxaa yeelay ma ogi inay shaqayso iyo inkale. Marka la soco inaan wax ka badali doono galitaanka natiijooyinka aan helayo.
Dabinku waa inuu ku saleysnaado kaneecadu waxay soo jiidataa CO2 ay dadku iska daayaanSidaa darteed, isku dar ah sonkorta buniga ah ee ku milma biyaha iyo khamiirka, tiro badan oo ah CO2 ayaa la soo saaraa, taas oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh.
Sida loo qaado sawirro makro leh mobiillo iyo muraayad weyneyso
Waxaan kuu daayay mini-hack ku qaado sawirada makro mobilkaaga. Waa doqonimo waxaadna ku arki kartaa xoogaa daliil ah a Nexus 4 iyo a Samsung Galaxy S2
Sidaad arki karto, waa inaad qabataa muraayad weyneeye leh balastar. Waxaan qaatay mid ka mid ah 30 koror oo ay ku iibiyaan dukaan kasta oo Shiine ah oo aan u maleynayo dhowr euro
Si loo sameeyo baaritaannada, Samsung Galaxy S2 Waxaan u dhigay qaabka dhaqale iyo Nexus 4 waxay la socotaa autofocus otomaatig ah
Bogga1 Bogga2 ... Bogga11 Xiga →